7 सर्वश्रेष्ठ खाद्य यात्रा गर्न अनुभवमा युरोप | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >7सर्वश्रेष्ठ खाद्य यात्रा गर्न अनुभवमा युरोप
आफ्नो स्वाद तन्तु मनपर्छ एउटा साहसिक मा जानुहोस् र युरोप मा सबै भन्दा राम्रो खाना पर्यटन भाग. तपाईं एउटा उत्सुक foodie हुनुहुन्छ भने, तपाईंको तालु, साथै आफ्नो इन्स्टाग्राम फिड तपाईं अनुभव हुनेछ के संग आनन्द संग हाम फाल्न हुनेछ. को पाठ्यक्रम, युरोपमा ग्यास्ट्रोनिक प्रतिभा कुख्यात शहरहरू भ्रमण गर्ने उत्तम तरिका हो रेल बाट. Here are our top of7सर्वश्रेष्ठ खाद्य यात्रा गर्न अनुभवमा युरोप.
1. खाद्य यात्रा गर्न अनुभवमा युरोप: Baguettes गर्न बिस्ट्रो मा पेरिस देखि, फ्रान्स
त्यहाँ एक शहर हो भने पाक रचनात्मकता संग बन्द आफ्नो मोजा दस्तक गर्न सक्ने, यसलाई गरेको पेरिस र यो, त्यसैले, युरोप मा सबै भन्दा राम्रो खाना पर्यटन सूचीमा पहिलो. फलस्वरूप, कि पेरिस चलाउन धेरै खाना पर्यटन बरु भनिन्छ गर्नुपर्छ खाना educations किनभने उनीहरू इतिहासको भिजेको छन्. परम्परा शताब्दीयौंको मार्फत तल पारित गरिएको छ.
पेरिसियन आवेग प्रेरित गर्न.
सबै आफ्नो प्रसिद्ध विनम्रता गर्न रोटी र पनीर को मूल कुराहरू देखि ढाकिएको छ, foie साथै Gras घर rillettes र Armagnac रूपमा. साथै, तपाईं पनि पेरिसियन मा revel गर्न सक्नुहुन्छ क्याफे संस्कृतिको.
पक्ष सडकमा मार्फत आफ्नो बाटो पवन र कति फैशनेबल रेस्टुरेन्ट मा आफैलाई विस्मित, क्याफे, डेली, र boulangeries छन्. फलस्वरूप, तपाईं उमेर पुरानो व्यंजनहरु को सही मिश्रण र खाद्य र in क्षेत्र मा नयाँ र प्रचलनको संपर्कमा पर्नुहुनेछ.
2. खाद्य Extravaganza: एम्स्टर्डम, नेदरल्यान्ड्स
तपाईं एम्स्टर्डम एक फरक पक्ष र यसको foodie दृश्य हेर्न चाहनुहुन्छ भने, को Jordaan जिल्ला को भेगका चोकहरूमा र फिर्ता सडकमा अन्वेषण. फलस्वरूप, साथै केही अन्तरदृष्टि शहरमा धनी इन्डोनेसियाली पाक सम्पदाको मा दिन रूपमा आफ्नो सिर्जनाहरू साझेदारी गर्न उत्सुक राम्रो खाना purveyors पाउनुहुनेछ.
हामी तपाईँलाई प्रतिष्ठित 400 वर्षीया क्याफे मा स्याउ पाइ प्रयास सिफारिस, क्याफे Papeneiland. तपाईं पनि धूम्रपान ससेज एक सताब्दी पुरानो परिवार नुस्खा बनाइएका प्रयास र माछा खान डच तरिका सिक्न सक्छ.
3. को क्राफ्ट बियर कला & खाद्य मा प्राग, चेक गणतन्त्र
तपाईं प्राग आफैलाई पाउन भने, को hipsters के के र आनन्द शिल्प बियर साथै एक खाद्य बजार भ्रमण. तपाईं पनि एक बियर विशेषज्ञ संग एक भ्रमण लिन सक्नुहुन्छ. तिनीहरूले एक PIVO मा तपाईं लिन खुसी हुनेछन् (बियर) यात्रा कुनै पनि अन्य विपरीत.
स्वाभाविक, शिल्प बियर सधैं केही विकल्प स्थानीय morsels खाने द्वारा उठाइरहेका. साथै, रकहां प्राग को foodie सम्पत्तिहरू केही नाम ब्रेज्ड बीफ संग स्कच अन्डा वा चेक पकौडी प्रयास गर्न सक्छ तर. यो युरोप मा सबै भन्दा राम्रो खाना पर्यटन हाम्रो सूची को लागि एक निश्चित छ.
4. खाद्य यात्रा गर्न अनुभवमा युरोप: उमेर-पुरानो परंपराओं मैड्रिड मा, स्पेन
एक bonafide foodie साहसिक लागि, मैड्रिड निराश छैन! मैड्रिड र मिलन स्थानीय विक्रेताहरु र restaurateurs मार्फत Meander. प्रयास स्थानीय रक्सी र पनीर ऐतिहासिक Anton मार्टिन बजार रमाउनुहुन्छ. केही, यकीनन, संसारमा सबै भन्दा राम्रो cheesecakes, जो केही सय वर्ष पुरानो भट्टामा मा सुखा छन्.
5. स्वाद शहर एउटा अंदरूनी देखि परिप्रेक्ष्य: भेनिस, इटाली
भ्रमण बुक तपाईं भेनिस हतारिएको गर्न चाहँदैनन् भने. शहरको इन र बहिष्कार चिन्ने कसैले र कसरी संभवतः भीडलाई जोगिन र तपाईंले केही पाउन दिनु सँग पुस्तक लुकेका रत्न. उदाहरण को रुपमा, एक पास्ता रेस्टुरेन्ट गर्न नहर मार्फत एक ट्रक सवारी लिन र prosecco एक गिलास पिउने तपाईंले केही प्रसिद्ध वाइन बारहरू जाँच अघि, स्थानीय Casanova गरेको लोकप्रिय.
6. खाद्य यात्रा गर्न अनुभवमा युरोप: अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य दृष्य मा बर्लिन, जर्मनी
बर्लिन खाद्य दृश्य प्रवृत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुन मा सही छ, र परिणाम स्वरूप, यो साथीहरू बनाउनको लागि उत्तम स्थान हो जब तपाईं खाद्यान्न यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ. केही मानिसहरू सँगै एकदम खाना गर्छ रूपमा ल्याउँछ.
हामी जहाँ तपाईं तपाईं आफ्नो आस्तीन रोल र आफैलाई एक परम्परागत भोजमा समाधान गर्न सक्छन् एक स्थानीय एक व्यक्तिगत खाना भ्रमण विचार सुझाव, बर्लिन-शैली.
तपाईं सबै कुरा आफैलाई बनाउन चाहनुहुन्छ भने:
क्रेजुबर्ग टर्की बजार जाँच गर्नुहोस् वा एक रोक्नुहोस् (वा तीन) विभिन्न क्याफे र बेकरी मा.
7. एक प्रामाणिक Foodie अनुभव: भियना, अस्ट्रिया
भियना सबै आकर्षण छ, तर यो यो स्वाद आउँदा त विशेष गरी छ. यो एक palpable प्रामाणिकता छ र तपाईं एक क्लासिक विनीज कफी घरमा एक यात्रा सुरु गर्नुपर्छ. कफी घर देखि, तपाईं लोकप्रिय Naschmarket आफ्नो बाटो बनाउन सक्छ, पनीर र सिरका समावेश अष्ट्रीया, संरक्षित को एक विस्तृत विविधता संग एक परम्परागत मणि.
तपाईं एक ससेज खान छैन र यदि त्यसपछि ग्राम मा एक तस्वीर लिन तपाईं Wurstelstand मा हुँदा, त्यहाँ पनि तपाईं थिए? वास्तविक लागि 🌭But, उनीहरूसँग सब भन्दा आश्चर्यजनक सॉसेज छ! एक ऐतिहासिक तहखाने मा केही अष्ट्रीया मदिरा तल यसलाई धुन र एक गएर केही delish मिठाई संग पूर्ण यो सबै बन्द अन्त ठूलो चकलेट दोकान. 🍫
खाद्य यात्रा गर्न अनुभवमा युरोप: निष्कर्ष
युरोप मा सबै भन्दा राम्रो खाना पर्यटन केवल आफ्नो मन झटका डिजाइन र तालु छन्. त्यहाँ विकल्प कुनै कमी छ.
तपाईं जहाँ जानुहुन्छ, को पर्यटन को सूचीकरण मार्फत हेर्ने गर्थे सर्वश्रेष्ठ तपाईं सुट.
तपाईं अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ रोज्ने र प्रयोग एक ट्रेन सेव तपाईंको रेल यात्रा को लागि.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “7 सर्वश्रेष्ठ खाद्य यात्रा गर्न अनुभवमा युरोप ” आफ्नो साइट मा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-food-tours-europe%2F%3Flang%3Dne اور– (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
निम्न लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, यो लिंक अंग्रेजी मार्गहरू अवतरण पृष्ठ लागि हो, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, र तपाईं परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ / डे गर्न / tr वा / ES र आफ्नो छनौट बढी भाषाहरू.
खन्चुवा FoodScene FoodTour इन्स्टाग्राम TrainsInEurope रेल यात्रा